Uma ungumuntu othanda i-Vampire Diaries, khona-ke uyakuqonda ukusonta okuyinkimbinkimbi futhi uphendulela ababhali bemibhalo yalolu chungechunge okwenziwe kwagcina abalandeli emaphethelweni ezihlalo zabo. Kunamaqhinga amaningi ababhali abawasebenzisile ongawafaka kubhulogi lakho futhi ugcine abafundi bakho bethembekile Isonto Nesonto, inyanga nenyanga nonyaka.
"Leli dolobhana lidinga ucingo oluvuswa kancane, awucabangi?" – UDamon Salvatore, uSizini 1, Isiqephu 02
Uma kwenzeka ungakayiboni i-Vampire Diaries, le ndaba imayelana nentombazane encane ehlangabezana ne-vampire (izwakala ijwayelekile), kodwa-ke ihlangana nomfowabo futhi ngaleyo ndlela iqale unxantathu wothando. Kodwa-ke, umugqa wendaba ubandakanya iningi lamanye ama-twist, kufaka phakathi ama-doppelganger, abathakathi, izipoki, ama-vilki, nazo zonke izinhlobo zezinye izimfanelo zemilingo ukuihibatileke.
1 Ikholi Yakho Yokuvusa
2 Sižeta pavērsiens!
4 Ungavumeli Ibhulogi Yakho Inake Ukuphila Kakhulu Kuwe
Ikholi Yakho Yokuvusa
Ingabe ibhulogi yakho kancane, kahle, iyabukeka? Enye indlela yokutshela kalula ukuthi ugcina abafundi bakho bahlanganyele ukubuka izinga lakho lokunciphisa. Ungathola lolu lwazi nge-Google Analytics. Isibonelo, izivakashi ziza kusayithi lakho, zihlala okwesibili ukuhlukanisa bese zigcwala?
Nikokve-Athikili ku Isikhathi sika-Tonijs Haile, unemizuzwana ye-15 okungenani yokubamba ukunaka komfundi futhi akugcine.
Esikhathini seVampire Diaries esibizwa ngokuthi "Es-Komētas nakts" (inkathi 1), indawo yokuvulwa yindoda nowesifazane besemahlathini. Inkungu ekhukhumezayo iwazungeza ngokushesha futhi inkhulumomphendvulwano yokuvula yile wesifazane ethi: "Uzwile lokho?"
Yiqiniso, abalobi banakekele. Ubani ongasiza kodwa aqhubeke nokufunda / ukubukwa ngokuvula okunjalo?
Ingabe ukuvuleka kwakho okubandakanya? Kubalulekile ukuba gcina abafundi bakho banesithakazelo ngezingwegwe nama-pakaramie ekubhaleni kwakho konke Bheka indatshana kaJerry Low Bhala izinhloko ezifana noBrian Clark, Neil Patel, noJon Morrow: Amasampula apukasulu we.
I-Vampire Diaries yaziwa ngokusonta okuhleliwe. Ukusonteka kwesakhiwo esihle akugcini nje ngokushintsha umdlalo, kepha kunengqondo kulowo osibukelayo / osifundayo. Ukuqapha! Uma kwenzeka ungazibonanga zonke iziqephu kukhona umchithi ongaphambili, ngakho-ke weqa isigaba esilandelayo uma ungafuni ukwazi ukuthi kwenzakalani.
Es-Spoileris: Ukusuka ku-Katherine engekho ethuneni, kuya ku-Bonnie wokuqamba amanga ngokufa kwakhe, ku-Elena ephenduka i-vampire, umbukiso ugcwele ukusonteka ngemuva kokusonta. Mhlawumbe elinye lama-twist amakhulu kakhulu wesikhathi sonke esisekupheleni kweSizini 6 lapho uKai ebeka u-Elena ebuthweni obuhle, obuhle bokulala ongeke avuke ngabo kuze kufe uBonie. Khuluma ngokuziphindisela kwakho okukhulu. Uvele wahlukanisa u-Elena noDamon (futhi) futhi waphatha kabi uBonnie kule nqubo ngoba ngeke esaphinde ambona u-Elena (noma uzokwazi? Mhlawumbe elinye icebo elisontekile?).
I-Plot ifuna ukubuka isihloko ngendlela ehlukile futhi ehlukile ngempela. Kusadingeka ukuthi kube nengqondo kumfundi futhi kube yinto engenzeka emhlabeni oye wasungulwa. Noma kunjalo, umgomo ukumangala umfundi.
Ngeblogi, kunezindlela ezimbalwa ongamangaza ngazo futhi ujabulele abafundi bakho bese ngokwenza lokhu “kusonteka kwesakhiwo”. Kodwa-ke, khumbula ukuthi i-twist yakho kufanele inengqondo. Awukwazi ukusebenzisa ibhulogi lamahhashi futhi ngokuzumayo unikeze okuthile ngamathiphu wokwenza izimonyo.
Nikeza i-workshop noma telekonference.
Pēc tam i-drone futhi uthathe isibhamu kusuka ekhoneni elihlukile bese ulayishe.
Mema ibhulogi yesimenywa kusayithi lakho.
Engeza i-pop up kuzo zonke izivakashi eziningi, ubapha i-freebie.
Thumela inothi lakho kumakhasimende akho aphezulu.
Esinye sezizathu eziyinhloko abantu baqhubeka bebuka i-Vampire Diaries futhi kungenkathi yayo yesikhombisa kungenxa yabalingiswa. Ababukeli baye bathola ukwazi, futhi bathanda lezo zinhlamvu.
Abalingiswa banokujula. Lapho uDamon ebuhlungu, uzokwenza okuthile. Lapho uStephan ezwa ubuhlungu, uzokwenziwa kodwa uzogcina ebuyela emuva. UCaroline uyintombazane enhle. U-Elena ukhululekile.
Siyazi ukuthi yini eye yabalimaza. U-Elena walahlekelwa abazali bakhe futhi uyazibeka icala, njll.
Siyazi ama-quirks uz vietas. UDamon uyadabuka futhi usenza sihleke. U-Elena uzokwenza noma yini kulabo abathandayo. UCaroline ufuna izinto ziphelele.
Lokhu kuhumusha kanjani kubhulogi yakho? Abafundi bakho badinga ukwazi kuwe ezingeni lomuntu siqu. Noma, uma uneqembu, badinga ukwazi abalobi bakho. Lokhu kuhilela izakhi eziningana:
Izithombe zabalobi bakho nawe.
Ama biogrāfijas ahlanganyela kancane mayelana nomunye.
Ababhali bakho bamane bathole ezomuntu ngezikhathi ezithile. Izifundiswa zizokutshela ukuthi ungalokothi usebenzise "wena" ekubhaleni kwakho. Kodwa-ke, uma ufuna ukubhala kwakho kubonakale kungokomuntu siqu kubhulogi, kubalulekile ukuba nengxoxo nabafundi bakho. Eqinisweni, ngingasho ukuthi kubaluleke kakhulu ukuba wedwa kunokuba unembile.
Ukwabelana ngamava. Kubalulekile ukuthi wena nababhali bakho nizimisele ukuhlanganyela lapho kwehlulekile nokuthi baphumelele kuphi ukuze abafundi bazi ukuthi bangasethemba isiluleko abasitholayo.
Ungavumeli Ibhulogi Yakho Inake Ukuphila Kakhulu Kuwe
Abalobi beblogi (nabalobi bombhalo) bangasebenzisa isikhathi esiningi bakha okuqukethwe abakwazi ukuzizwa beshisiwe. Uma uchitha usuku nosuku phambi kwekhompyutheni yakho ngaphandle kokuphumula, cishe uzoqala umzabalazo wokuza nakho konke okuthakazelisayo ukukubhala ngakho.
Uma uzithola uhleli phambi kwekhibhodi yakho, ungakwazi ukuthayipha noma yini, yisikhathi sokugcwalisa kahle ubuciko bakho bokudala. UJulia Cameron ukhuluma ngokugcwalisa kabusha ubuciko bakho encwadini yakhe ethi “Mākslinieka ceļš”. Kubalulekile ukuthi abantu abanobuciko basebenzise isikhathi esithile benza eminye imisebenzi ukugwema ukuvinjelwa.
Thatha uhambo, vakashela imnyuziyamu, noma mhlawumbe uchithe isikhathi esincane no-Ian Somerhalder (Damon) ubukele isiqephu sakamuva seVampire Diaries. Uzomangala ukuthi usithola kanjani ugqozi lokubhala kwakho kanye nebhizinisi lakho.
Uma ungumuntu othanda i-Vampire Diary, khona-ke uyakuqonda ukusonta okuyinkimbinkimbi futhi uphendulela ababhali bemibhalo yalolu